Orinasa 100 ambony indrindra mifantoka amin'ny mpanjifa manerantany 2022 - Victor Mochere
Amin'ny maha-mpanjifa anao dia afaka mahatsapa izany ianao rehefa lasa ambony sy mihoatra ho anao ny orinasa iray, dia toa… hafa izany. Saingy raha toa ka mora tokoa ny mandeha ambony sy mihoatra ho an'ny mpanjifa, ny orinasa rehetra dia hanao izany - fa tsy manao izany. Nahoana? Eny, sarotra ny manao izany. Sarotra ny mamorona traikefa mahagaga ho an'ny mpanjifanao rehetra rehefa tsy nataonao ho taolan'ny orinasanao izany. Saingy ny marika kintana mamirapiratra sasany dia tena manao izany, ary fantatr'izy ireo ny fomba "manao izany" amin'ny fotoana rehetra.
Inona no ataon'izy ireo? Mahatonga ny mpanjifa hahatsapa ho tsara izy ireo. Izany no mahatonga ny 89% amin'ireo orinasa izay mitarika miaraka amin'ny traikefan'ny mpanjifa dia mahavita ara-bola tsara kokoa noho ny namany. Ireo orinasa ireo dia manana fifantohana amin'ny mpanjifa amin'ny zavatra rehetra ataony, manomboka amin'ny fomba itondrany ny mpiasa ka hatramin'ny fomba fanavaozana sy fanompoana ny vondrom-piarahamonina misy azy ireo - satria tsy afaka miasa ao anaty banga fotsiny ianao. Ny hetsika rehetra ataonao, ny fanapahan-kevitra rehetra, dia misy fiantraikany amin'ny lolo, ary ny hoe mifantoka amin'ny mpanjifa amin'izao fotoana izao dia midika koa ny fahatsiarovan-tena.
Ny ankamaroan'ny orinasa mifantoka amin'ny mpanjifa dia tsy fantatra fotsiny amin'ny traikefan'ny mpanjifa lehibe, fa tsara izy ireo amin'ny maha-toerana tsara azy, manana fahafaham-po amin'ny mpanjifa avo lenta, mahazo mari-pankasitrahana momba ny kolontsaina, mahazo fankatoavana fanavaozana. Ny mpanjifa dia manantena ny orinasa hanohy hanao manokana ny traikefan'ny mpanjifa, ary hihaona amin'ny mpanjifa amin'ny toerana misy azy ireo, na eo am-baravarana nomerika, na amin'ny traikefa phygital. Ny orinasa ankehitriny dia miatrika mpanjifa niova, fanerena vaovao ary filàna matanjaka kokoa amin'ny fanovana eo amin'ny fiarahamoniny sy izao tontolo izao.
Ny orinasam-pandraharahana ambony indrindra mifototra amin'ny mpanjifa dia raisina araka ny fepetra manaraka:
Toe-tsaina mifantoka amin'ny mpanjifa - Ahoana no fomba itondran'ny orinasa ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny serivisy mpanjifa sy ny fantsona hafa? Mikasa ny hampihena ny adin-tsaina amin'ny vokatra sy serivisy kalitao ve ny orinasa? Mandray anjara amin'ny traikefan'ny mpanjifa ve ny mpanatanteraka? Misy kolontsaina ve ny mpiasa mifoha mientanentana hanompo ny mpanjifa?
Andraikitry ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana - Tian'ny mpanjifa ny orinasa hijoro amin'ny fanavakavaham-bolon-koditra sy ny tsy fitoviana. Mijoro amin'ny olana ara-kolontsaina manakiana toy ny fahasamihafana sy ny tontolo iainana ve ny orinasa? Laharam-pahamehana ve ny mangarahara sy ny faharetana?
Ny traikefan'ny mpiasa – Omena fahefana hanao tsara ny asany ve ny mpiasa? Manana fitaovana, habaka ara-batana ary kolontsaina ve izy ireo mba hahatsapana ho sarobidy amin'ny asa sy hanompoana ny mpanjifa? Ny foibem-pifandraisana dia malaza amin'ny fanomezana mpiasa tara loatra. Mitondra ny mpiasan'ny foibem-pifandraisana toy ny ankizy izy ireo, ka mahatonga ny ankamaroan'ny fifandraisana amin'ny serivisy ho mahasosotra
zava-baovao – Nahita fomba famoronana hamahana olana ve ny orinasa? Mitarika ny indostriany ve izy ireo ary mamorona vahaolana vaovao? Mitady fomba vaovao sy tsara kokoa hatrany ireo orinasa vaovao mba hanompoana ny mpanjifany
Ireto ny orinasa 100 ambony indrindra mifantoka amin'ny mpanjifa eto amin'izao tontolo izao.
Toeram-pisakafoanana sy sakafo
Manufacturing sy Logistics
Mpivarotra an'i Joe
Ankoatra ny hena
Vata fampangatsiahana tsy misy intsony
Sakafo tsy lavorary
Hopitalim-pikarohana momba ny ankizy St. Jude
Manofa fiara dolara
Fiainana manana fiainana